एक उम्दा मद्दत बुनाई spikelets बन्न
आफ्नै कान मा प्रत्येक बुनाई बुझाउँछ, तर यो केश धेरै राम्रो-groomed उपस्थिति सिर्जना गर्ने, बिस्तारै चुल्ठो ठूलो तरिका हो भनेर टिप्पण लायक छ। अक्सर कार्यालय शैली को छाडा बहने कपाल मा एक सख्त प्रतिबन्ध एक निश्चित केश presupposes। यो हाकिम बोलाउँदा, हेर्नुहोस् तपाईंको बिन्दु को बारेमा छलफल गर्न गाह्रो छ, त्यसैले यसलाई कसरी भन्ने सिद्ध नजर सिर्जना गर्ने सोच लायक छ , महान कुनै पनि कठिनाइ सिर्जना बिना।
यस मामला मा, बुनाई उद्धार आउन spikelet। एकल कपाल मा सबै बाल भेला यस तरिका बिस्तारै केश चुल्ठो गर्न मात्र होइन, तर पनि केही शान को छवि थप्न अनुमति दिन्छ।
कस्तो बुनाई कान सुझाव? यो किसिमहरु बुनाई द्वारा सिर्जना गरिएको छ जो कुनै साधारण पुच्छर छ। यो कपाल बाँकी बुना छ जो एक plait छ। थप स्पष्ट हुन, spikelets बुनाई तीन वा बढी किसिमहरु को माध्यम ले, तर पनि चुल्ठो साथ आन्दोलन केश बाहिर झिकेर जो र किसिमहरु थपिएका छन् अतिरिक्त pryadok को प्रयोग संग मात्र होइन बाहिर छ।
यसलाई त्यहाँ भिन्न छन् भने छ बुनाई को प्रकार जो चुल्ठो प्रकार भिन्न spikelets। उदाहरणका लागि, यो एक सामान्य चुल्ठो वा फ्रान्सेली प्रजातिहरू हुन सक्छ। धेरै शिष्ट, आधुनिक र flirty लग disheveled फ्रान्सेली चुल्ठो, को spikelets को आधार लागि प्रयोग गरिन्छ जो। यो सबै spikelets braiding सुरु गर्न निर्णय गर्ने केटी को कौशल र कल्पना मा निर्भर गर्दछ।
प्रकार साथै braids spikelets विशिष्ट र बुनाई को दिशा हुन सक्छ। अर्थात् बुनाई कान टाउको मा गर्न सकिन्छ:
- संग (को निधारमा देखि ग्रीवा vertebrae गर्न);
- transversely (अन्य एक कान बाट);
- diagonally (विकर्ण निर्देशन स्वतन्त्र चुनिएको छ);
- circumferentially (अर्थात्, घन्टी);
- सर्पिल (कताई सर्पिल सुरु वा माथिबाट वा किनारा बाट)।
त्यसैले, आज उनको टाउको मा कान बुनाई धेरै लोकप्रिय भएको छ। र आफ्नो पक्षमा छैन प्रसार धेरै लायक छ। तर यो त्यहाँ कपाल विविधता यो विधि को एक विशेष लाभ छ भनेर भन्न महत्त्वपूर्ण छ। यो मध्यम र छोटो लम्बाइ को बाल बुनाई मौका छ।
बुनो छोटो कपाल मा spikelets किनभने spikelets बाल लम्बाइ कुरा छैन को उपलब्ध छैन। मुख्य महत्त्व नयाँ pryadok थप्दा फ्रिक्वेन्सी दिइएको छ। यस कारण, छोटो कपाल केटी उनको कपाल को लम्बाइ एक अद्वितीय केश सिर्जना गर्न पर्याप्त छैन भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन।
कान बुनो - यस्तो तरिकाले कौशलतासाथ मात्र कर्ल घुमाई एक केश सिर्जना गर्न किनभने यो, fashionistas लागि वास्तविक godsend छ, तर पनि उनको कपाल सबैभन्दा रोचक र अनपेक्षित तत्व Weave।
आज अक्सर उनको कपाल मा विपरीत सिर्जना गर्न मोती वा रंगीन रिबन संग मुद्दा कान मा बुना छ। यस्तो बुनाई नै सुन्दर छ, तर एक दक्ष पूरक संग कुनै पनि कम्पनी सबैभन्दा ज्वलन्त र expressive हुनेछ। साथै, फूल वा धनुष पनि सजिलै एक स्पाइक मा, फिट गर्न सक्छन् केटी आकर्षक coquette बनाउन।
कुनै आश्चर्य बुनाई कान धेरै वर्ष को लागि यति लोकप्रिय। यो यस्तो राम्रो-groomed बाल फरक र शुद्धता छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। तर सबै छ। मुख्य कुरा केश भने श्रम प्रयासमा को स्पष्ट जटिलता छ। बुनाई spikelets को प्रशंसा प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनेछ, Hairstyles सिर्जना गर्न सबैभन्दा सरल तरिका गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ धेरै केहि मान्छे संग।
आधुनिक अवस्थामा टाढा सार्न कपाल र चित्रकला सीमित छन् जो परम्परागत Hairstyles देखि आवश्यक। केटी निरन्तर परिवर्तन गर्नु पर्दछ र बुनाई कान को सरल प्रविधी संग मद्दत गर्न सक्छ। उसोभए, तपाईं कल्पना को एक बिट थप्न भने, सबै ovations र rapturous sighs तपाईं समर्पित हुनेछ।
कसरी बुनना गर्न बनियान महिला तीन दिन कुरा
कसले के राशि को संकेत दुष्ट? हास्यास्पद विनोदी Horoscope दुष्ट। तपाईं के दुष्ट राशिफल?
Psilocybin मशरूम: किसिम, वितरण, संग्रह समय
लाटविया एउटा भिसा लागि कसरी लागू गर्ने?
प्रेमको दूत आकर्षित: Cupid आकर्षित गर्न कसरी
कल्पना के हो? कल्पना: परिभाषा
क्याल्सियम क्लोराइड - यो के हो? क्याल्सियम क्लोराइड समाधान
जाली उत्पादनहरु - दोस्रो सास।